सामुद्रिक डाँकुद्वारा स्वीस जहाजका १२ जनाकाे अपहरण ! - Everest Dainik - News from Nepal
सामुद्रिक डाँकुद्वारा स्वीस जहाजका १२ जनाकाे अपहरण !
२०७५, ७ आश्विन आईतवार
स्वीट्जरल्याण्ड असोज ७ ।
नाइजेरियाली सामुद्रिक क्षेत्र हुँदै आफ्नो गन्तब्यमा हिँडेको स्वीस पानीजहाजका १२ चालकदलका सदस्यलाई सामुद्रिक डाँकुले अपहरण गरेर लगेको उक्त जहाजको कम्पनीले जनाएको छ ।
मासोल सिपिङ्ग कम्पनीका अनुसार एमभि ग्लारूस नामक जहाजका १२ सदस्यलाई नाइजेरियाको व्यापारिक शहर लागोसबाट गहुँ लिएर दक्षिणी बन्दरगाह हाकोर्टतर्फ हिँडिरहेका समय अपहरण गरेको लगेका छन् । जहाजमा रहेका बाँबी ६ जना भने सकुशल रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस स्वीट्जरल्याण्डका खेलाडीलाई जरिवाना, प्रतिबन्धबाट भने जोगिए !
“अपहरणकारीले चालक दलका १२ र जहाज रहेका बहुमुल्य सामानलगायत अधिकांश सञ्चार सेटसमेत लुटेर लगेका छन्,” मासोलका प्रवक्ता प्याट्रिक एडमसनले जानकारी दिए ।
कम्पनीले सुरक्षाका लागि भन्दै अपहरणमा परेका कसैको नाम तथा उनीहरूको ठेगाना नखुलाएको जनाएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा गतबर्ष पनि जहाज लुटिएको र करिब ६० जनालाई अपहरण गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा हुने कबतिपय आक्रमणलाई व्यवसाय धारासायी हुने खतराका कारण कम्पनीहरूले सार्वजनिक नगर्ने गरेका छन् । अपहरणमा परेका सबैजनाको सकुशल उद्धारका लागि कम्पनीले सम्वन्धित अधिकारीसँग पहल शुरु गरेको जनाएको छ ।
ट्याग्स: ship, switzerland